Dunkashada dareenka leh oo la ogaaday inay jaceylka kordhiso. “SIR CULUS” | Gaaloos.com
Home » galmada » Dunkashada dareenka leh oo la ogaaday inay jaceylka kordhiso. “SIR CULUS”
Dunkashada dareenka leh oo la ogaaday inay jaceylka kordhiso. “SIR CULUS”
Dhunkashada dareenka leh ee Xaaskaaga/Seygaaga aad dhunkato ayaa ka qeyb qaadata in dareenka Xubigan xambaarsan ee Jaceylkaaga uu sii kordhiyo.
Marka aad Shumineyso Xaaskaaga/Seygaaga ha u adeegsan si xoog ah balse is jilci oo dareenka Naxariista leh u muuji si aad u hanato Qalbiga Lamaanahaaga, dhunkashada noocaas ah wexey kordhisaa Rabitaan saa’id ah oo ay isu qaadaan labada qof ee Nolol wadaaga ah.
U muuji Lamaanahaaga in marka aad Dhunkaneyso uu dareenkaaga oo dhan uu isaga gacanta ku hayo/heyso, ogow xiliyada Shumiska Noocaas ah aad wadaageysaan wexey ka dhigantahay in Nolosha aduunka ugu Raxmada badan aad ku jirtaan.
Jaceylka dhabta ah ee dhiiga iyo Lafaha u dhaadhaca waxaa beeri kara Nolosha noocaan ah, waxaadna ogaataa in Macaanka lamaahana uu xiligaasi dareemayo uu ka dhasho Jaceylka dhabta ah ee Labo qof ay isu qaadaan.
Marka aad dhunkashada Noocaas ah Lamaanahaaga aad la wadaagto waxaa marag ma doonto ah in dareenkaaga oo dhan uu diyaar garoobayo, waxaana Shumiska Noocaas ah loo ogolyahay Labada qof ee sida Sharciga Islaamka Ogolyahay ay Nolosha uga dhexeyso.
Habada si aad u hanato Qalbiga lamaanahaaga ku dadaal adeegsiga ereyada macaan ee qalbi soo jiidashada leh, hana ka daalin in aad dhunkato markasta oo aad fursad u hesho adigoo kali isku ah.
Nolosha Noocaas ah wexey horseedeysaa in uu Waaro guriga Lamaanaha is qaba ee Gogosha wada wadaaga.
Filo qeyb dambe oo dhunkashada ka hadleysa oo soo socota.
Title: Dunkashada dareenka leh oo la ogaaday inay jaceylka kordhiso. “SIR CULUS”